China Capsule PET Blue ifektri abakhiqizi | Qianduo Okufakiwe
Ukupakisha okuphezulu. Ukupakisha okuphezulu kokuhlukaniswa ukusetshenziswa kwezinto ezinokuhlukaniswa okuhle ukulawula umusi wegesi namanzi. Ukuhogela, ukukhanya, njll kuphakheji ukuqinisekisa ukusebenza kwezidakamizwa. Ukupakisha okuphezulu kokuhlukaniswa kuye kwasetshenziswa kabanzi eYurophu naseJapan. Kodwa-ke, i-China yethule i-PVDC namanye amaphakheji wokuhlukanisa aphezulu kusukela ngawo-1980, kepha ukukhula kwayo kuhamba kancane. Ngakho-ke, ukukhula kokufakwa okuphezulu kokuhlukaniswa kwezinto kuyindlela enkulu yokupakisha okuguquguqukayo kwezidakamizwa eChina;
Amaphuzu avelele Amabhodlela Ezemithi Yezemithi Yezemithi
1. High ukwahlukanisa emaphaketheni. Ukupakisha okuphezulu kokuhlukaniswa ukusetshenziswa kwezinto ezinokuhlukaniswa okuhle ukulawula umusi wegesi namanzi. Ukuhogela, ukukhanya, njll kuphakheji ukuqinisekisa ukusebenza kwezidakamizwa. Ukupakisha okuphezulu kokuhlukaniswa kuye kwasetshenziswa kabanzi eYurophu naseJapan. Kodwa-ke, i-China yethule i-PVDC namanye amaphakheji wokuhlukanisa aphezulu kusukela ngawo-1980, kepha ukukhula kwayo kuhamba kancane. Ngakho-ke, ukukhula kokufakwa okuphezulu kokuhlukaniswa kwezinto kuyindlela enkulu yokupakisha okuguquguqukayo kwezidakamizwa eChina;
2. Yize indawo ehlanzekile yokukhiqizwa kwezidakamizwa ihlelwe ngokuya ngezidingo ze-GMP, ifomu lokulinganisa alikwazi ukuba yinyumba ngenkathi kukhiqizwa futhi kufakwa. Ngakho-ke, ukuze sandise impilo yeshalofu yezidakamizwa futhi siqinisekise ukuphepha kokusetshenziswa kwezidakamizwa, kufanele samukele izinto zokupakisha ze-antibacterial polymer zokupakisha izidakamizwa ngokuya ngezidingo ze-GMP, ukuze silawule ukungcoliswa kwamagciwane, okuzophinde kube ngenye yezinkomba ukupakisha okuguquguqukayo kwezidakamizwa;
Ukupakisha "okuluhlaza". Ukupakisha "okuluhlaza" kwezidakamizwa kubhekisa ekupakisheni okungenabungozi emvelweni nasempilweni yabantu, futhi izinto zokupakisha zingaphinde zenziwe kabusha. Ngemuva kokuqaliswa kwezinga le-ISO1400, ukuthuthukiswa kokupakisha "okuluhlaza" sekuyinto ebalulekile. Ngokuzayo, sizobe sikhululekile ukuthuthukisa futhi ngokujwayelekile sisebenzise izinto ezintsha zokupakisha ukuvikelwa kwemvelo njengokusebenzisa kabusha, ukucekela phansi, ukubuyela emvelweni, ukuthungela kanye nokungcoliswa komoya;
4. Ukupakisha okuncane kokulinganisa. Ukupakishwa kwamamitha okuncane kudinga ukuthi ukufakwa kwangaphakathi kwezidakamizwa kunomsebenzi wokulinganisa, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwezinto zokupakisha ezinemiphumela yemitha kanye nokupakisha ukusetshenziswa kwesikhathi esisodwa, kanti okwamuva kungukufakwa okujwayelekile okulinganiselwe. E-United States, ukupakisha okukodwa kusetshenziswe kabanzi ngo-1990. Ngokuthuthuka kwezinto ezihlanganisiwe nokukhula kobuchwepheshe bokupakisha bukaJun, iChina ikwazile ukuqinisekisa ngempumelelo ukunemba kokupakisha okuketshezi nokuqinile okukodwa, kepha izoqhubeka nokukhulisa ukupakisha okuncane kokulinganisa, okulula futhi okunembile.
5. Ukuphathwa kokulawulwa kwemvelo. Okubizwa ngokuthi "ukufakwa komthethonqubo wezemvelo" ukuguqula isimo segesi emaphaketheni nokuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo ehlanganisiwe isikhathi eside, njengokufakwa okuvalwe nge-desiccant (oksijini omuncayo), nokupakisha okufaka esikhundleni somoya ( ukugcwaliswa kwe-nitrogen, njll.).
6. Ukupakisha kwe-Aseptic. Ukupakisha kwe- "Aseptic" kuyiphuzu elibalulekile ekubulaweni kukaJun nezidakamizwa zokupakisha endaweni ye "aseptic" ngokwamukela ukushisa okuphezulu okusheshayo okubulala ubuchwepheshe bukaJun. Izinto eziyinhlanganisela zivame ukusetshenziselwa ukunquma izimo ezahlukahlukene ze-extrusion nokubunjwa okuyinhlanganisela kokupakisha. Inezinzuzo zokuxhumeka okuhle kwezithako zezidakamizwa, ukunweba impilo yeshalofu, ukonga amandla, izindleko eziphakelwayo eziphansi, kulula ukubona ukupakishwa kokuvikelwa kwemvelo, njll. Ukwenza i-serialization kokufakwa kwezidakamizwa kusho ukuthi izidakamizwa ezikhiqizwa ngumenzi ofanayo zamukela ukuhlangana okufanayo izinto zokupakisha. Isibonelo, ukupakisha kwe-blister kunganquma ushintsho lwosayizi wepuleti nesithombe se-aluminium foil ukufinyelela kufakwa kokuchungechunge. Ngokuqaliswa kwe-OTC embonini yezokwelapha yaseChina, ukufakwa kwe-serial kuyabaluleka kakhulu, futhi kuzokhombisa amandla ayo ekukhuleni okuzayo kokufakwa kwemithi okuguqukayo;
7. Ukupakisha kweNano. Ukusetshenziswa nokuthuthukiswa kwe-nanotechnology nama-nanomaterials emkhakheni wezokwelapha kunikeza ithuba elikahle lokupakishwa kwezidakamizwa zaseChina. Ukukhula kwe-nanopaper, i-polymer based nanocomposites (pnmc), ama-nanoadhesives namaphakethe we-nanoantimicrobial kuzovula izindawo ezintsha zokupakisha okuguquguqukayo kwezidakamizwa.
Langaphambilini I-Capsule Bottle PET Emnyama
Olandelayo: Ibhodlela le-Capsule PET Brown